Maxay kawada hadleen kudhawaad 100 xildhibaan iyo Madaxwayne Farmaajo? - Tilmaan Media
Habaynkii xalay waxaa aqalka madaxtooyada Villa Somalia uu kulan qarsoodi ah kudhex maray madaxwaynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kudhawaad 100 xildhibaan oo katirsan baarlamanka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay qodobada kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxda dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka oo uu kamid ahaa in dalka doorasho qof iyo cod ah aysan kadhici karin wakhtiga harsan.
Xildhibaanada ayaa madaxwayanaha kala hadlay in aysan suurtagal ahayn in dalku doorasho dadban aado iyada oo baarlamanku ansixiyeen sharciga doorashooyinka.
Sida wararku sheegayaan madaxwayhana ayaa xildhibaanada usheegay inuu Dhuusamareeb aadayo lana wadaagi Baarlamanka wixii kasoo baxa.
Kulankan ayaa kusoo aadaya iyada oo shalay gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu kasoo horjeedsaday go,aanadii kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb,isagoo sheegay in Baarlamanka Soomaaliya oo kaliya uu xaq uleeyahahy jaangoynta nooca doorasho ee dalka laga qabanayo.
Labada aqal ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa kukala qaybsan qaabka ay tahay in loo maareeyo doorashooyinka dalka, gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa qaba in hab siyaasi ah loo mareeyo arrimaha doorashada, ayna tashadaan saamilayda siyaasadda dalku.